संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा ★ बाबुराम पन्थी 'गुल्मेली'★ प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २४, २०७३
लेखक : बाबुराम पन्थी 'गुल्मेली' विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या : 12 प्रकाशन मिति : बुधबार, कार्तिक २४, २०७३ रेसुङ्गा नगरपालीका वाड नं १, तम्घास गुल्मीका बाबुराम पन्थी पन्थी हाल चीनको मकाउमा हुनुहुन्छ । ईमेल ठेगाना - bgomrr@ gmail.com बाबुराम पन्थी 'गुल्मेली'का अरु रचनाहरु कुरा सन् २००५ को मध्यतिरको हो । नेपालको प्रहरी सेवामा कार्यरत रहँदा पनि चरम आर्थिक अभाव झेल्नु परेकोमा निकै तनावमा थिँए म । श्रीमती र एक छोरालाई पनि सामान्य खर्च पुर्याउन पनि गाह्रो हुने । त्यस माथि सँगै बस्न पनि नसकिने । कुनै दिन नुन किन्ने पैसा नभएर अलिनो तरकारीसँग छाक टार्न बाध्य मेरो जीवन ! कसरी सुधारिन सक्छ यो सरकारी नोकरीले ? अनि कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ सन्तानलाई ? त्यसै माथि जीवन साथीका न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा गर्न गाह्रो थियो । त्यसमाथि छुट्टिंदा भागमा परेको ऋणको ब्याज बुझाउन पनि गाह्रो साँबा त जिन्दगी भर तिर्न सक्ने उपाय थिएन । कटेरोको बास अनगिन्ती समस्याका बीच एउटा आनन्दको जीवन जिउने मेरो सपना बीच युद्ध चल्थ्यो मेरो मस्तिष्कमा ।
लगानी राम्रो लगाउन र राम्रो कमाउने सपना बुन्ने आधार थिएन । कम लगानीमा राम्रो आय हुने ठाउँको खोजी गर्दा युद्द ग्रस्त देश इराक़ मेरो रोजाईमा पर्यो । जाँहा इराक़ी तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको विरूद्ध अमेरीकी राष्ट्रपति जर्जडब्ल्यू बुसले छेडेको भिषण युद्द चलिरहेको थियो ।
नेपाली उखान छ नि ” मर्नुभन्दा बौलाउनु निको ” मेरो चैं फरक थियो सोंच ” चरम गरिबीमा बाँच्नुभन्दा संघर्षमै मर्नु राम्रो ” । तर आत्महत्या गर्नेहरू चैं काँतर हुन मेरो नजरमा । यसरी तैयार भएको मेरो यात्रा भारत मुम्बईको तीन महिनाको बसाई । मुम्बई बसाईमा अन्तरबार्तामा पास हुने रसँगै यात्रा तय हुनेमा आठ जना नेपाली थियौँ । जसमा पूर्व परिचित कोही थिएनौँ । आतंतकारीले इराकमा बाह्र जना नेपालीको हत्या गरेकै पर्सी पल्ट हामी इराक कै लागि मुम्बईबाट जोर्डन ट्रान्जिटको लागि उडेका थिंयौ । पैसोको लागि बली चढ्न मन्जुर थिंयौ हामीहरू । कसैका आँखाहरूमा बाँचेर र घर फर्किने आशा देख्न सक्दैन थियो । सामुहिक यात्रा पनि मौन थियो । सन्नाटा थियो ।
ट्रान्जीटको लागि जोर्डनको राजधानी अमानको बीच तिरै पर्ने हिलसाईड होटलको बास थियो हामीहरूको । गरिबी पीडा युक्त जीवनबाट मुक्ति खोज्न भौतारिएका नेपाली युवाहरूको आठ जनाको टोली । नेपाल देखी मुम्बईको करिब तीन महिनाको बसाई पछि जोर्डनको राजधानीसम्म पुग्दा सबैजनासँग प्राय बोकेको पैसा खत्म भैसकेको थियो । एकातर्फ सुनौलो संसारको सपना अनि अर्कों तर्फ बाबा आमा श्रीमती कसैको त बच्चा पनि भैसकेको थिएन भने हुनेहरूका पनि सानै थिए । सबैको सपना पुरा गर्ने सोंचले विदेशको यात्रा तय गरेकाहरू । सबै जना आ आफ्ना परिवारका दु:ख सुख आपसमा बांडी बस्दथे काम केही थिएन । मन लागेको किनेर खान पनि पैसा थिएन । होटलमा जे दिन्थ्यो त्यही खानेकुरा खानुपर्ने बाध्यता ! कम्पनी एजेन्ट मोहम्मदले त्यहाँ बस्ने चाँजो पाँजो मिलाएको थियो ।
तर म योभन्दा पनि ठूलो दलदलमा भाषिन सक्ने आभास गरे । मेरो यात्रा जति चिन्ता गरेपनी मैले चाहे बमोजिम हुने छैन । उनीहरूलाई सुम्पिएको शरीर कतै मानव तस्करहरूको शिकार भइन्छ कि भन्ने कुरामा सजग थिए म तैपनि उसको पछाडि लाचार भएर लाग्नुभन्दा मसँग कुनै विकल्प थिएन । होटलमा राखेर व्यावस्था मिलाएर गएको मोहम्मद चार दिनसम्म नआउदा केटाहरू कम आत्तिएनन् । पहिलो पाँचौ दिनमा ऊ होटलमा आयो र सबैलाई होटलको लाउन्जमा बोलायो र भन्यो “एभरी वडी रेडी टु मुभ फोर्म हेयर टुमारो मर्निड् एट वो क्लक, एट टेन यु अल गाइज विल फ्लाई टू इराक ! ” अहो सबैको अनुहारमा चमक थपियो भोलि इराकको लागि उड्नेभन्दा । लाग्छ इराकमा युद्द छ भनेर सबैले बिर्सीय जस्तै । सायद जीवनको सफलताको एउटा खुड्कीलो जस्तो लोग्यो तर अगाडि मृत्यु बरण हुन सक्ने अत्यधिक संभावना थियोका पनि हामी खुशी थियौ ।
मोहम्मदले भने जस्तै बिहान सबैजना सबेरै उठेर नुहाई ध्वाई गरी आठ बज्नुभन्दा पहिले नै होटलको लाउन्जमा तैयार । गाडी लिएर आयो मोहम्मद र सबैलाई जोर्डनको इन्टरनेश्नल एयरपोर्ट पुरायो । एयरपोर्टमा पुलिसले रोक्यो । नेपाल सरकारले इराकमा बाह्रजनाको हत्या भएपछि जोर्डन हुँदै इराक जाने जो कोही नेपाली भेटेमा नेपाल फर्काइदिनु भनेर पत्राचार गरेको छ हामी पठाउन सक्दैनौ भन्यो ।
सबै जना एक आपसमा हेराहेर गर्नु बाहेक कसैको मुखबाट केही कुनै शब्द निस्केन बरू सबैका आँखामा आँशुको भेल उर्लिदै थियो भने हामीहरू जबरजस्त रोक्ने असफल प्रयास गर्दै थियौ । हामीहरू असफल जिन्दगी लिएर घर फर्किने अवस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिरहेका थिएनौ । युद्दमा मर्न बरू हाँसी हाँसी जान तैयार कस्तो विडम्बना । जिन्दगी भोगाई कति गार्हो छ । मुम्बईमा अन्तरबारता मै तिमीहरूको इनिस्योरेन्स निकै राम्रो छ भनेको थियो । सायद त्यो पैसा प्राप्तिको लागि ज्यान दिन तैयार थियौ हामीहरू ।
मोहम्मदले सबैलाई फर्काएर फेरि होटलमा ल्यायो र आफू चैं “लेट्स सी आई विल ट्राई डन्ट वोरी ” भनेर गयो । केटाहरूको बीचल्ली ! एजेन्ट अब भगवान हो, अल्लाह हो आशीर्वाद हो आशाको सानो विन्दु हो । जिन्दगीको डुंगा उसकै हातमा छ । उसकै पर्खाइमा दिनहरू बितीराछन् ऊ फर्केर आऊदैन । होटलले जे दिन्छ चुपचाप खायो मनमा अनेक गन्टना खेलायो बस्यो । अब तसँगै बस्ने साथीहरू पनि अपरिचित जस्तै ! फुस्रा अनुहारमा ओंठ मुख सुकाएर चिन्ता को भुमरीमा फसेकाहरू । उनीहरूको लागि युद्दमा दुष्मनले वर्षाउने ती मोर्टार्ड गोला बारूदभन्दा त्यहीबाट घर फर्किने चिन्ता भयानक थियो ।
अशोजको महिना थियो गाउँ घरमा दशैको रौनक शुरू भैसकेको छ । झन् झन् घरको समझाने पीडा माथि पीडा उता काम बन्दैन एजेन्ट फर्केर आउदैन कसैसँग फोन पनि छैन होटल वालालाई फोनको लागि अनुरोध गर्दा पनि कल गर्न दिदैन । पैसाको नाममा एक दिनार कसैसँग छैन विदेशको ठाँऊ । कतिपय केटाहरू होटलको परिसरमा कसैले तानेर फालेका चुरोटका ठुटा खोजेर सल्काउछन् र तान्छन् कोही त्यही च्ुरोटको ठेटा खोलेर खैनी जस्तै ओठमा च्याप्छन् ।
हे बिधाता ! दु:ख दिने पनि त सीमा हुन्छ नि तिमी त कति दया नभएको रहेछौ । कतै काम गर्न पनि जोर्डनमा काम पाँइदैन पासपोर्टहरू एजेन्टसँगै थिए । कतै घुम्न निस्कीन पनि नहुने र सुकै खल्तीमा नभाकाहरू कता घुम्नु ? यो बियोग होला भनेर कसले सोच्या थियो होला र नेपालको सरकारी नोकरी छाडेर हिड्दा । कोही पछुतो मानेर रूव्छन्,कोही फर्केर के मुखले घर जाने बरू मर्ने भन्छन्, कोही हिम्मतीलो कुरा गर्छन् केटा हो ज्यान नेपाल पुगे त केही गर्न सकिन्छ ।
एक हप्ता पछि मोहम्मद एकजना साथी लिएर आयो । केटाहरू निकै रोए ऊसँग । गुनासो पोखे ठिक तेसै दिन विजया दशमी परेको रहेछ । सबैले मोहमदलाई एकपटक घनमा सम्पर्क गराउन अनुरोध गरेपछि दुई दुई मिनेट घडी हेरेर सबैलाई घर घरमा सम्पर्क गरायो । ऊ त सबैको लागि भगवानको रूप थियो । घरबाट हिडे देखी काम बनेर फ़ोन गरौलाभन्दा भन्दै करिब चार महिनासम्म पनि फोन हुन नसकेको पनि थिए कोही । कस्तो संयोग दशैंको दिन आफू पीडाको दलदलमा फसे पनि घर परिवारलाई म ठिक छु भन्न पाएकोमा सबै हर्षित थियौ ।
विजया दशमीको दिन घरसम्म आफू कुशल रहेको खबर सबैले गरिसकेपछि हामीले एजेन्ट मोहम्मद को ब्रिफिंग सुन्नु पर्ने थियो । उसले आज पनि केही उपाय ननिस्किएको र अब आफूसँग एउटा मात्र उपाय बाँकिरहेको बताउदै अब अन्तीम प्रयास गर्ने र बढीमा चार पाँच दिन भित्र कि त इराक कि नेपाल फर्किनु पर्ने कुरा गर्यो र निस्कियो ।
कुनै उपाय आफै खोज्न पनि सकिदैन सबै निराश अनुहार । साँझ पख तीन जाजना साथीहरू बरालिन बाहीर निस्किएछन् । त्यति खेरै एकजना यादव साथीले पचास दिराम बाटोमा भेटाएछन् । होटलमा सबै जना विच पचास दिनार के गर्ने भनेर बहस नै भयो । यो यादवको नित्तान्त ब्याक्तीगत पैसा हुन सक्थ्यो तर साथीले त्यसो गरेरन् । अमानबाट मृतसागर करीब पच्चीस किलोमीटरको दुरीमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र र इजरायलको बोर्डर पनि भएकोले कतैबाट अनधिकृत तरीकाले इजरायल छिर्न सकीने संभावना भएमा इजरायल छिर्ने नभए फर्केर आउने सर्तमा सहमति भयो । हामी मध्ये चार जना जाने भए चार जना नजाने टोलीमा बिभजित भयौ । भोलि बिहान म सहितको चार जनाको टोली पचास दिराममा मृतसागरको लीगी निस्कीयौ । पासपोर्ट एजेन्टसँगै थियो । बिदेशमा बिना पासपोर्ट र पैसाको यात्रा प्राय असंभव हुन्छ । कतै प्रहरी चेकमा परियो भने पक्राउ परीने निश्चित छ । ट्याक्सीको यात्रा तय गरेका हामीहरू मृतसागर पुग्नुभन्दा पहिले दुई तीन ठाउँ प्रहरी चेकमा पर्यौ संयोग पासपोर्ट सोधेन प्रहरीले । त्यहाँ पुगेर प्राकृतिक सौन्दर्यमा रम्नुभन्दा पनि चोर बाटोबाट इजरायल छिर्न्े हाम्रो लक्ष्यलाई पूर्णता दिने खोजीमा थीयौं तर त्यो सम्भव भएन । साँझ हामी चारैजना अमान फर्कियौ । मात्र मृतसागरको पारी पट्टिरहेको इजरायललाई हेरेर ।
भेटेको पचास दिराम पनि सकियो । पर्सी पल्ट बिहान करीब आठ बजेतिर मोहम्मद एकजना फ्रेन्चकट काटेको अग्लो खाइलाग्दो मान्छे लिएर होटलको हाम्रै कोठामा आयो ।
मोहम्मदले उसको नाम अली बताउदै ऊ लेबननी भएको बतायो । त्यस पछि अलीले भन्यो ” डन्ट वोरीज गाइज् आइ विल ब्रिड्ग यू इराक डे अफ्टर टुमारो “। प्राय सबैको अनुहारमा उत्साह थपिएको थियो भने आँखाहरू रसायका पनि प्रष्टै देखीन्थे । त्यहाँ धेरै कुराकानीहरू पनि भए र पर्सी बिहान इराक जानको लागि एयरपोर्ट जानुपर्ने बताए उनीहरू तर यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नभएर अमानको डोमेस्टिक एयरपोर्टबाट हाम्रो उडान हुने र उडान सिधै इराक नभएर लेवनन हुने कुरा बताए । यदि प्रहरीले सोधेमा लेवननबाट नेपाल फर्किने भन्नु पर्ने निर्देशन दिए र फर्किए ।
त्यो नयाँ मान्छे जो हामीलाई लिन आएको छ ऊ बिस सिट भएको सानो जहाज लिएर लेबननबाट हामीलाई लिन आएको रे !
म चकित परे । आठ जना नेपाली कामदारलाई इराक लैजानको लागि हवाईजहाज चार्टर गरेर ल्याइएको छ । त्यो पनि अर्कै देशबाट । लाग्छ हामी आठ जना नजाने हो भने इराकको बिध्वम्स रोक्न कसैले सक्दैन ! नभए यती धेरै महत्व किन ? अरू साथीहरू खुशी छन् तर म योभन्दा पनि ठूलो दलदलमा भाषिन सक्ने आभास गरे । मेरो यात्रा जति चिन्ता गरेपनी मैले चाहे बमोजिम हुने छैन । उनीहरूलाई सुम्पिएको शरीर कतै मानव तस्करहरूको शिकार भइन्छ कि भन्ने कुरामा सजग थिए म तैपनि उसको पछाडि लाचार भएर लाग्नुभन्दा मसँग कुनै विकल्प थिएन । मैले साथीहरूलाई पनि यो कुराले छनक दिए उनीहरूमा केही निराशा थपि दिएँ मैले जस्तो लाग्यो । मेरो लागि सबै जना सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
पर्सी बिहान होटलमै एजेन्ट अलीको जिम्मा लगायो मोहम्मदले हामीहरूलाई । मोहम्म्दको इमान्दारी र सहयोग को लागि धन्नयवाद दिदैं अबको यात्रामा अलीसँग के के हुनेहो खै !
सबै जना एयरपोर्ट पुग्यौ डोमेस्टीकमा । त्यहाँ अलीको अर्को साथी पनि थपियो । जति अपरिचित मान्छे थपियो त्यति शंका लाग्छ, भय थपिन्छ मनमा । तुरून्तै मन घर पुग्छ श्रीमती र नर्सरीमा पढ्दै गरेको छोरा के गर्दै होलान ? चिन्ता माथि चिन्ता छ । गाउँ अनि छाडेर हिंडेको सरकारी नोकरी रपश्चाताप बीच पनि मेरो यात्रा रोकिने छैन घर छाडेर हिंडेको चैथो महिना बित्दै छ र म लक्ष्यमा पुग्न अँझै कति समय लाग्ने हो वा जीवन यतै सकीने हो त्यो समयले नै बताउला । त्यो पनि अरूको मर्जी चलेको मेरो जिन्दगी ! एजेन्ट गलत खालको हो भने ज्यान जतिखेर पनि जान सक्नेछ । मेरो मृत्यु गुमनाम हुनेछ चाहनेहरू चैं फर्किने छ भन्ने झिनो आशामा जीवन बिताउने छन् । मनमा यस्तै यस्तै कुरा खेल्दै लेवननको लागि भनेर जहाज चढियो ।
हामी आठ जना, अली र उसको नयाँ साथी नाम पनि थाहा छैन अनि पाइलट र एकजना एयर होष्टेज । आधा सिट खाली थिए चार्टर भएकोले । मैले अलीलाई सोधे ” हाउ लड्ग डिउरेसन वी हेभ फ्लाईट टू बेरूत ? जवाफमा भन्यो एबाउट फोर्टी फाइभ मिनट्स । मैले घडी हेरे बिहान नौ चालीस भएको थियो । यो सूचना मेरो लागि अति महत्वपूर्ण थियो ताकी पैतालिस मिनेट पछि मैलै उसलाई प्रश्न गर्न सक्नेछु ।
उसले दिएको समयमा लेवननको राजधानी जहाज ओर्लियो भने केही समयको लागि भएपनी मन ढुक्क हुनेछ । तर यसो भएन । मैले ख्याल गरिराको थिए जहाजको बाँया पट्टीबाट सूर्यको किरणहरू जहाजको भित्र परेकोमा तुरून्तै विपरित दाहिने पट्टीबाट सूर्यको किरण भित्र पर्ना साथ मलाई एकिन भो कि जहाज अब अन्यत्रै मोडिएको छ । मैले साथीहरूलाई भने ख्याल गर्नुभो साथीहरू जहाज कतै मोडिएको छ । कसैले ख्याल गरेको रहेनछन् । हुनपनी यती सुक्ष्म कुरा कसले अध्ययन गर्छ र ? तर म चै कहिलेपनी अति सुक्ष्म कुराहरू याद गर्ने वा शंकालु बानीको मान्छे छु । मैले अलीलाई सोधे “अलरेडी मोर देन वन हावर देन स्टील वी फ्लाइड्ग, ह्वयर यु ब्रिड्ग अस ? एण्ड आइ फिल प्लेन हे्याज चेन्ज रूट । ” उसले जवाफमा मुस्कान दिदै भन्यो ” डन्ट वरी वी ल्यान्ड एबाउट हाल्फ एन हावर, सोम प्रोबोलेम टू ल्याण्ड ” उसले हाँसेरै भनेपनी हामीहरूको धड्कन बढेर आयो । कुरा गरिरहेका साथीहरू पनि एकाएक चुप चाप तनावमा रूमलिए आफ्ना आफ्ना सोचमा । अली र उसको साथी आपसमा हाँस्दै कुरा गरिरहेका छन् आफ्नै भाषामा एक शब्द बुझ्दैनौ हामीहरू ।
अलीले मलाई दिएको टाइम लाइन सकिनै लाग्दा जहाजले बिस्तारै आकाश र जमिनको दुरी कम गर्न थाल्यो । अब जहाज ओर्लने छ तर बेरूतमा चैं हुदै होइन भन्नेमा म पक्का थिए । जति तल झर्यो धुलाम्य आकाश कुहीरोभन्दा बढी थियो त्यो आकाशमा धुलो । जहाज ल्याण्ड भो ! बाहीर हेरे खिड्कीबाट ” बगदाद इन्टरनेश्नल एयरपोर्ट “लेखेको बोर्ड देखे । युद्द ग्रस्त क्षेत्रमा अबतरण गर्दा पनि ढुक्क भो कि अब एजेन्टहरूबाट ठगिनु पर्दैन बरू आतंकवादी समुहको शिकार हुन सकिने संभावना बढेर गयो । तैपनि आफैले रोजेको ठाउँमा पुग्न सकिएकोमा खुशी लाग्यो । मैले अलीलाई “थैड्क्यू सर ” भने, उसले जवाफमा भन्यो ” यू सी आइ फक् जोर्डनी गोभर्नमेन्ट”! मैले उसको समर्थनमा यस् सर भने, उसले आफ्नो कोटको खल्तीबाट तीन वटा देशको पासपोर्ट देखायो मलाई, म अचम्म परे ! संसारमा कस्ता मान्छेहरू छन् जसो पनि गर्न सक्ने । जे सुकै भएपनि उनीहरूले गरेको सहयोगको कारण इराकमा पाइला टेकियो ।
त्यसपछि कम्पनीमा आबद्द भएर विभिन्न युनिटहरूमा विभाजन भएर कोही मसुल कोही वासारा त कोही अन्यत्रै खटीयौ । युद्धरत ठाउँको जीवन हरेक क्षण मृत्युको मुखबाटै बांचेको आभास हुन्थ्यो । बम गोला बारूद गोलीसँग खेल्दा मृत्युलाई निकै नजिकबाट छेल्दै त्यहाँको कष्टकर दिन बिताईयो ।सँगै गएका साथीहरू मध्ये यादव र मेरो त्यहाँ को बसाई रूस्तामीया, करवाला र फलुजाको युद्द, अमेरिकन सैनिक क्याम्पहरू को अनुभव र अमेरिकन आर्मीहरूको लाइफ स्टाइललाई निकै नजिकबाट अध्ययन गर्दै नेपाल फर्काइसँगै र सकुशल रह्यो ।
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो हनी पफ मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म छालमा रुझेकी उ नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान छोक सागओल दोस्तलार मेरो प्यारो ओखलढुंगा सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com